Ngo-dolobha yesizwe sethu eduze isakhiwo Conservatory. Tchaikovsky ungabona ebaziwe yasekuqaleni futhi okumangazayo wezingoma odumile. UPyotr Ilyich wasebenza izinhlobo ezehlukene, futhi namuhla umculo wezinsimbi yakhe, iculo, ballets futhi opera, umhlaba wonke uyazi. Akumangalisi ukuthi lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky eMoscow ibukeka omkhulu futhi eshiya wazithinta ngokujulile bonke abakubonayo ngamehlo ami siqu.
UPyotr Ilyich wayesebenza esikhumulweni somculo kusukela wokuvula yayo, njengoba omunye wothisha ehola. Ngo-1940, lesi sikhungo wathola igama umqambi omkhulu, futhi ngo-1945 kwaqalwa umsebenzi we- ukudalwa kwezithombe ezinhle kakhulu. Le phrojekthi eyinhloko umqophi Vera Mukhina, ke wayeke usuvele udale ngokudayisa ka Tchaikovsky zakhe endlini-Museum emzini Klina. Ngokuya ngalolu hlelo yokuqala umqambi omkhulu kwadingeka uzovezwa emi, ukuqhuba-orchestra ongabonakali. Nokho, isikhumbuzo enjalo Tchaikovsky eMoscow akabonakalanga. Into wukuthi ebaziwe kwadingeka ukuyifaka eduze somculo, nendawo eduze isakhiwo hhayi okungaka. Le phrojekthi yesibili Wayenesizotha kakhulu: umqophi kuvezwa Petra Ilicha ehlezi, kodwa izandla zakhe zaba simisiwe phakade abaculi kalula ezihambayo.
I ebaziwe kwaba ngo-1954. Ngeshwa, Vera Mukhina kwadingeka isikhathi mathupha zibabaza indalo yakho. I umqophi wafa cishe ngonyaka ngaphambi kuvulwa lesikhumbuzo, kodwa umsebenzi izinga igcwaliswe abafundi bakhe. Ukwakheka ubukeka esingavamile ngempela - uPyotr Ilyich esihlalweni phambi etafuleni futhi uqhuba. I ebaziwe is wazenza ngethusi. Itshe lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky eMoscow isethwe esisekelweni sezingeni eliphezulu egwadle abomvu. Ukwakheka sculptural uphelelise le efakwe eduze kwebhentshi zemabula grille zensimbi. Lena ucingo ongokomfanekiso yakhelwe njengoba stave, futhi umbhalo kocingo of lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky eMoscow - hhayi ukuthi abanye, njengoba izingxenye imisebenzi edume kunazo umqambi.
"Bronze" UPyotr Ilyich abagqoke nje - ke suit zakudala ehlanganisa ibhantshi nebhulukwe. Etafuleni umqambi ne incwadi umculo evulekile, futhi esandleni salo wachaza ukuthi uqhuba ipensela. Ubuso Petra Ilicha kokubili ucabangisisa futhi ngempela ephapheme futhi kuhle. Ngicabanga ukuthi cishe necebo tune entsha - ukudluliswa yayo iphepha kwasala. Umbhalo oku lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky eMoscow futhi izici emfushane: legwadle obomvu izinhlamvu voluminous amnyama engeza ngokuvumelana nokuzinikezela esibanzi: ". Omkhulu umqambi Russian Petru Ilichu Chaykovskomu"
Uma ngokucophelela nothango oluzungeze lesikhumbuzo, ungabona hhayi kuphela uchungechunge amanothi. Kukhona usuku zokuphila umqambi sika: 1840-1893. Umbhalo oku lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky eMoscow - lena ukuzinikezela phezu plinth hhayi kuphela. On the kocingo zensimbi , ungabona imigqa amanothi, alo in izingcezwana imisebenzi efana "Swan Lake", "Eugene Onegin", "Usuku Ingabe nokubusa ..." kanye nabanye.
Urban Legends nezibonakaliso umfundi
Ngo-2007, ukubuyiselwa ebaziwe nokulungisa igceke insimu eduze lwenziwe. Yini kwaba amakhosi isimanga, lapho kwavela ukuthi seliphelile kusuka esibayeni sakhe sibe namaphuzu ambalwa noma izimpawu kusukela kocingo. Ukuya phambili, kumelwe bathi zonke amanothi amagama lesikhumbuzo ukuze Tchaikovsky e Moscow, usubuyiselwe futhi bahlanza. Kodwa ubani futhi kungani uzibophezele Senzo phansi?
Impendulo ilula. Into wukuthi bonke abafundi Conservatory nezinye umculo izikhungo zikholelwa ukuthi lokhu lesikhumbuzo qiniseka ukuthi uvakashela usuku ngaphambi kokuthi uyobhala ezibalulekile noma nokuhlola. Kungenzeka ukuthi izakhi elincane ebaziwe babemane adiliza abafundi izivakashi njengezinto eziyisikhumbuzo talismans. "Bronze" Tchaikovsky hhayi kuphela kuletha inhlanhla ukuba abaculi imfundamakhwela. Abafundi abaningi somculo bathi uma ubheka phezulu lesikhumbuzo, ungabona ukuthi kufana isibonakaliso "fermanta" njengoba lisetshenziswe notation emculweni.
Thola Tchaikovsky lesikhumbuzo e Moscow Kulula ngempela, njengoba etholakala eduze isakhiwo YaseMoscow Conservatory. Ikheli lomgwaqo: Street Nikitskaya, njll 13. ngu ezokuthutha zomphakathi elula kunazo ukuya metro station "Arbat", bese eya sebhasi "Square Arbat Gate.". Ungesabi ukuba ulahleke - ukwakhiwa somculo kungabonwa esekude, futhi bonke abantu abadlulayo uzokutshela indlela ukuya kuso.
Umnyango lesikhumbuzo ukukhulula, ku ukufudumala izinyanga, abafundi kanye izivakashi zihlangana ukuze uphumule azungeze kuye. Ayikho Ukwakheka kancane umxhwele metal amnyama, netshe, abheke ngemuva kweqhwa ebusika. Woza sibheke lokhu Luhambo mathupha nemizwelo acacile usuke okuqinisekisiwe ngasiphi isikhathi sonyaka.
"Angelika Forte": ukubuyekezwa, ukwakheka, imiphumela emibi, analogs
Indlela uthele amanzi hookah: imfundo, iseluleko ukulungiselela kanye nokubuyekeza
IDB - okungukuthi, omunye uchungechunge insipho noma wobuciko?